Baarlamanka oo ansixiyay heshiiska doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
Baarlamanka oo ansixiyay heshiiska doorashadda
Madaxda Maamul Goboleedyada ayaa qeyb ku lahaan doono hanaanka soo xuliska Xildhibaanada Baarlamanka cusub, iyagoo magacaabaya xubnaha gudiga isku dhafka ee doorashadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada labada aqalka ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta u codeeyay heshiiska doorashadda ay dhawaan Muqdisho ku kala saxiixdeen Farmaajo iyo madaxda Maamul Goboleedyada dalka.
Gudoonka BF ayaa shaaciyay in 252 Xildhibaan ay ansixseen heshiiska, 1 ayaa ka aamusey, 2 mudane waa ay diidey Heshiiska, sidaasuu dalku ku aadayo Doorashado.
Kulanka ayaa waxaa si wadajir ah u gudoomiyay labada gudoonka labada aqalka, iyadoo uu ka dhacay xarunta Villa Hargeysa, oo gudaha Madaxtooyadda ku taalla, waxaana la sheegay in Farmaajo uu kaalin ku lahaa ansixinta heshiiska.
0 Comments Topics: aqalka sare baarlamaanka
Waayeelka siyaasadda oo weli ka cabanaya Farmaajo iyo Rooble
Warar 6 August 2021 10:44
Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa sheegay in Rooble ugu hanjabay afarta xubnood ee isaga soo magacaabey inuu ka saarayo Gudiga doorashadda Xildhibaanada Somaliland, haddii aysan tagin goob gudiga hogaan ku dooranayo.
Farmaajo oo lagu eedeeyay inuu iska indha-tirayo sharciga dalka
Warar 2 December 2020 8:49
Cabdi Xaashi iyo C/kariin Guuleed oo kawada hadlay doorashadda
Warar 22 November 2020 8:10
Dacwad laga gudbiyay Farmaajo, Rooble iyo Fahad Yaasiin
Warar 15 November 2020 14:40